:: My Little World ::: ♦ How to protect your GMail account!
Posted by Nay Nay Naing at 1/28/2009 04:09:00 PM
မသိသေးတာတွေ ပါလို့ ဖတ်သွားပါတယ်...။
ဒီ post လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
အချို့ အချက်တွေကို ခုထိပေါ့ပေါ့ဆဆ လုပ်မိနေသေးတာ။
Wednesday, January 28, 2009 4:43:00 PM
Very good post. some of fact only i know after reading ur post... thankalot..
Thursday, January 29, 2009 12:15:00 AM
ကျေးဇူး.ယူပီဂျီ. အဲ နေနေ.
Thursday, January 29, 2009 12:32:00 AM
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ စေတနာပါပါလေး ရှင်းပြရေးသားထားတာ ကျေးဇူး မနေနေ...
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေဗျာ...
များ မူးနေပါတယ် ဆိုမှ..
မနေနေရဲ့ blog ကိုအမြဲဝင်ဖတ်ပေမယ့် တခါမှ comment မရေးဘူးသေးဘူး။ ဒါပထမဆုံးပါ။ ကျွန်မမှာ သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိပါတယ်။ သူက programmer ပါ။ တော်တော်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ သူကတော့ gmail password ကိုအလွယ်တကူဖောက်နိုင်တယ်။ ကျွန်မ password ကိုဖောက်တာ ခဏလေးပဲ။ ကျွန်မပြောင်းလိုက်လဲ သူမိနစ်ပိုင်းအတွင်းပြန်ဖောက်နိုင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ ဆိုတာကိုတော့မေးလို့မရဘူး။ အဲလိုလုပ်နိုင်တဲ့ hacker တွေအများကြီးပဲ ရှိပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်အရေးကြီးတဲ့ data တွေမပြောမိဖို့ပါ။ ဥပမာ - bank account တို့ဘာတို့ပါ။ သမီးရည်းစားတွေ စကားပြောပြီးရင်လည်း ဖျက်ထားတာအကောင်းဆုံးပါ။ အကောင်းဆုံးက မနေနေပြောသလိုပဲ password ခဏခဏပြောင်းပေးဖို့ပါ။ အားလုံးသတိထားလို့ ရအောင်ပြောပြတာပါ။
ဂျီမေးနဲ့ ပက်သက်တာတွေ အများကြီးသိရတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးအများတင်ပါတယ်..
ဒီBlogလေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ သတိထားစရာလေးတွေ သိထားရပါတယ်.
Thank you ma nay for handy tips!
ဒီပို့စ်ကို ပရင့်ထုတ်ပြီး ကျနော့် အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ကပ်ထားချင်လို့... အားလုံးဖတ်လို့ရအောင်လေ။
အဲဒါ ခွင့်ပြမလားဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။
Monday, August 23, 2010 5:08:00 AM
Yes , feel free to use... no copy right or no need to refer my name or link..
Thanks for asking me my permission..
Monday, August 23, 2010 9:49:00 AM
ဟင်းဟင်း ပစဝ တွေ မေ့သွားတဲ့နေ့ကိုသတိရဦးမယ်ဆိုရင်...